सिक्किम यसरी लग्यो भारतले - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
सिक्किम यसरी लग्यो भारतले
साउन २ गते, २०७४ - ११:५९
६ एप्रिल १९७५ को बिहान सिक्किमका राजा चोग्यालले आफ्नो राजदरबारको गेटबाहिर भारतीय सैनिक ट्रकहरुको आवाज सुने । उनी दौडिएर झ्यालको छेउमा गए । उनको दरबारलाई चारैतिरबाट भारतीय सैनिकहरुले घेरा हालिसकेका थिए ।
त्यही बेला मेसिनगन चलेको आवाज सुनियो र दरबारको गेटमा खटिएका वसन्तकुमार क्षेत्री गोली लागेर ढले । त्यसबेला खटाइएका ५,००० भारतीय फौजलाई सिक्किमको राजदबारमा खटिएका २४३ जना गार्डलाई नियन्त्रणमा लिन आधा घण्टा पनि लागेन ।
त्यो दिन १२ बजेर ४५ मिनेट जाँदा सिक्किमको स्वतन्त्र देशको हैसियत समाप्त भइसकेको थियो । चोग्यालले ह्याम रेडियोमार्फत यसको सूचना पूरै विश्वलाई दिएका थिए । र, उक्त आपतकालीन सन्देश ब्रिटेनको एउटा गाउँमा बस्ने अवकाशप्राप्त चिकित्सक र जापान र स्वीडेनमा बस्ने अन्य दुईजनाले सुनेका थिए । त्यसपछि चोग्याललाई उनको घरमा नै नजरबन्दमा राखियो ।
दिल्ली नगरका आयुक्त बीएस दास त्यसको भोलिपल्ट दिउँसोको खाना खाइरहेका थिए । यत्तिकैमा उनलाई विदेश सचिव केवल सिंहको फोन आयो र उनी तुरुन्तै उनलाई भेट्न हिँडे । विदेश मन्त्रालयमा पुग्ने बित्तिकै केवल सिंहले उनलाई न्यानो स्वागत गर्दै भने, “तपाईँलाई सिक्किम सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्न तुरुन्तै गान्टोक पठाइँदैछ, तपाईँसँग तयारीका लागि मात्रै २४ घण्टा छ ।”
जब भोलिपल्ट सिलीगुडीबाट दास हेलिकोप्टर चढेर गान्टोक पुगे। उनको स्वागतका लागि चोग्यालका विरोधी काजी लेन्डुप दोर्जी, सिकिम्मका मुख्य सचिव, प्रहरी आयुक्त र भारतीय सेनाका प्रतिनिधि बसिरहेका थिए ।दासलाई र्यालीसहित पैदल हिँडाएर उनको निवासमा पुर्याइयो । त्यसको एक दिनअघि उनले चोग्यालसँग भेट्ने समय मागेका थिए तर उनलाई राजाले आफूले ज्योतिषीलाई सल्लाह गरेरमात्रै समय दिनसक्ने जवाफ दिएका थिए ।
दास भन्छन्, “त्यो त एउटा बहाना मात्रै थियो खासमा उनी म र मेरो ओहदालाई मान्यता नदिएको देखाउन चाहान्थे ।” भोलिपल्ट चोग्यालले दासलाई बोलाए तर त्यो बैठकको माहोल एकदमै कटूतापूर्ण रह्यो।
चोग्यालको पहिलो वाक्य यस्तो थियो, “मिस्टर दास, सिक्किम तपाईँहरुले कब्जा गर्नुभएको गोवा जस्तै हो भन्ने भ्रममा नरहनुहोला ।” उनले भुटान जस्तै दर्जा सिक्किमलाई दिलाउन निकै प्रयास गरेका थिए ।
“हामी एक स्वतन्त्र सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न देश हौँ, तपाइँले हाम्रो संविधान अनुसार काम गर्नुपर्छ, भारतले तपाईँको सेवा हाम्रो सरकारलाई दिएको छ, यो विषयमा कुनै भ्रम हुनुहुँदैन र हामीलाई दबाउने प्रयास कहिल्यै नगर्नुहोला ।”
सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन दासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । एक दिनअघि बीएस दास त्यहाँ खटिएका आफ्ना साथी शंकर बाजपेयीलाई भेट्न जब इण्डिया हाउस पुगे तब उनलाई केवल सिंहबाट के निर्देशन लिएर आएका छौँ भनेर सोधिएको थियो ।
दास सम्झन्छन्, “मलाई सिक्किमका जनताका आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्नु भन्नेबाहेक कुनै पनि स्पष्ट निर्देशन थिएन्, अरु बेला जस्तै इन्दिरा गान्धीले कुनै औपचारिक राजनीतिक किसिमको वाचा गरेकी थिइनन् । अनि विलय भन्ने शब्दको त उच्चारण समेत गरिएको थिएन ।”
उनले थपे “यहाँसम्म कि हामीलाई काम लगाइरहेका केवल सिंहले निजी कुराकानीमा समेत यो शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेका थिएनन्, तर नभनिए पनि मलाई र शंकर बाजपेयी दुवैलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भइसकेको थियो ।”
दिवंगत वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक इन्दर मल्होत्राका अनुसार सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने सोच पलाएको थियो । स्मारिक विज्ञहरुले महसुस गरे कि भुटान, सिक्किम र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र नजिकै पर्ने चीनतर्फको चुम्बी उपत्यकाबाट सिलिगुडीतर्फको ‘चिकेन्स नेक’ भनिने साँघुरो मार्ग हुँदै भारतको दूरी जम्मा २१ माइलमात्रै थियो ।
चीनले आफूले चाहँदा एकै पटकमा उक्त क्षेत्र हुँदै उत्तरी भारतमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो । चुम्बी उपत्यकाकै छेउमा सिक्किम थियो।सिक्किमका चोग्यालले एकजना अमेरिकी महिला होप कुकसँग विवाह गरेका थिए ।
अमेरिकी पत्नीले चोग्याललाई छाडिन्
चोग्यालकी श्रीमती होप कुकको व्यक्तित्व रहस्यमयी थियो । चोग्याललाई भारतविरुद्ध भड्काउन उनले भूमिका खेलेको ठानिन्छ । उनले विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा फेरबदल गरिदिएकी थिइन् र युवा अधिकारीहरुलाई बोलाएर उनी हप्तैपिच्छे बैठकहरु गर्ने गर्थिन् । जब रानीको भूमिका निर्वाह गर्थिन् उनी सिक्किमका कपडा लगाएर एकदमै विनम्रता साथ प्रस्तुत हुने गर्थिइन् र मसिनो स्वरमा कुराकानी गर्थिन् ।
तर जब उनी असन्तुष्ट हुन्थिन् उनी एकदमै रिसाउने गर्थिन् । धेरै रक्सी पिउने चोग्यालको बानीले उनलाई हैरान बनाएको थियो र त्यही विषयलाई लिएर दुईबीच झगडाहरु समेत हुने गरेको बताइन्छ ।
एकचोटी रिसाएर चोग्यालले उनको ‘रेकर्ड प्लेयर’ राजदरबारको झ्यालबाट बाहिर फ्यालिदिएको बताइन्छ । अन्ततः होप कुकले सिक्किम छाडेर अमेरिका फिर्ता जाने निर्णय लिइन् ।
चोग्यालले उनलाई मुश्किलको त्यो बेलामा साथ दिन अनुरोध पनि गरेका थिए तर उनले मानिनन् । उनलाई बिदा गर्न दास गएका थिए । उनले जाने बेलामा भनेको कुरा सम्झिंदै दास भन्छन्, “मिस्टर दास, मेरो श्रीमान्‍को ख्याल राख्नुहोला, अब यहाँ मेरो कुनै भूमिका छैन ।” दासले राजदरबारका कैयौँ बहुमूल्य कलाकृति र चित्र लुकाएर होपले अमेरिका पुर्याएर जानकारी पाउँदा आफूलाई एकदमै दुःख लागेको बताएका छन् ।
दास भन्छन्, ८ मे महिनामा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पनि चोग्यालले कहिल्यै मनभित्रैबाट त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । उनले देश बाहिरका कैयौँ मानिसहरुबाट मद्दत मागेका थिए । उनले एकजना महिला वकिललाई यो सम्झौता गलत हो भनेर वकालत गर्ने जिम्मेवारी नै दिएका थिए । चुनाव घोषणा भएपछि चोग्यालले दक्षिण सिक्किमको यात्रा गर्ने इच्छा जाहेर गरे ।
दासले उनलाई त्यसो नगर्न सुझाव दिएका थिए। पहिला जब उनी ती क्षेत्रहरुमा जाने गर्दथे त्यहाँ उनको स्वागतका लागि सडकमा लामबद्ध भएर धेरै मानिसहरु बस्ने गर्दथे ।
तर त्यसपटकको यात्रामा उनले आफ्ना तस्वीरमाथि जुत्ता झुण्डाइएका दृश्य देखे । चुनावमा चोग्यालले समर्थन गरेको नेश्नलिस्ट पार्टीले ३२ वटामध्ये एउटा मात्रै सीट जित्यो ।
जति पनि नयाँ सदस्यहरुले चुनाव जिते उनीहरुले चोग्यालको नाममा शपथ नलिने र उनी संसद्‍मा आए संसद्को कारबाहीमा भाग नलिने चेतावनी दिए । दास नयाँ चुनिएको संसद्का सभामुख थिए ।
उनी भन्छन्, “त्यसपछि चोग्यालले आफ्नो विरोध लेखेर पठाउने र मैले त्यो सबैको अगाडि पढेर सुनाइदिने अनि सिक्किमको नाममा शपथ लिने कुरा तय भयो ।”
यसैबीचमा नेपालमा राजाको राज्याभिषेकमा राजकीय अतिथिका रुपमा चोग्याल काठमाडाैं आए । उनले पाकिस्तानी राजदूत र चीनका उपप्रधानमन्त्री चिन सी लिउसँग भेटवार्ता गरे र आफ्ना अप्ठेराहरु फुकाउन मद्दत मागे ।
बीएस दासले उनलाई एउटा लिखित दस्तावेज दिएका थिए जसमा बाहिरी समर्थन जुटाउन नलाग्न भनिएको थियो । “तपाईँको राजवंशले निरन्तरता पाउनेछ, तपाईँका छोरा उत्तराधिकारी बन्नेछन् तर त्यसका लागि तपाईँले आफू संरक्षित रहेको स्वीकार गर्नुपर्नेछ र ८ मेमा भएको सम्झौता मान्नुपर्नेछ ।” तर उनले आफ्नो अडान छाडेनन् । चोग्यालको जवाफ थियो, “मेरो देश स्वतन्त्र देश हो र यसलाई म छाड्दिँन ।”
सन् १९७४ को जुन ३० मा चोग्यालले इन्दिरा गान्धीलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला इन्दिरा गान्धीका सचिव रहेका पीएन धरले आफ्नो पुस्तक ‘इन्दिरा गान्धी: द एमरजेन्सी एण्ड इन्डियन डोमोक्रेसी’ मा उक्त भेटवार्ताको प्रसंग समेटेका छन् । उनले लेखेका छन्, “जसरी चोग्यालले आफ्नो मुद्दा इन्दिरा गान्धीसमक्ष राखे त्यसबाट म एकदमै प्रभावित भएँ, उनले भनेका थिए भारतले सिक्किममा जो नेताहरुलाई लिएर दाउ लगाइरहेको छ उनीहरु विश्वास गर्न योग्य छैनन् ।”
इन्दिराले जवाफमा उनले कुरा गरिरहेका राजनीतिज्ञहरु जनताले चुनेका प्रतिनिधि हुन् भनिन् । चोग्याल अरु केही कुरा गर्न खोज्दै थिए, इन्दिरा चुप लागिन् । इन्दिराले मौनतालाई नकारात्मक प्रतिक्रियाका रुपमा प्रयोग गर्न खप्पिस थिइन्। उनी जुरुक्क उठिन् र आफ्ना दुई हात जोडेर रहस्यपूर्ण ढंगले मुस्कुराइन्। चोग्याल बिदा हुन सक्छन् भन्ने इशारा थियो त्यो ।
चोग्याल अनौठो व्यक्तित्वका धनी थिए उनले कहिले पनि सिक्किमको पृथक पहिचानसँग सम्झौता गरेनन्। दास भन्छन्, उनले एकपटक मात्रै चोग्याललाई हार स्वीकार गरेको देखे । चोग्यालका छोरा तथा उत्तराधिकारीको दुर्घटनामा निधन भएपछि उनले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
यसैबीच उनकी श्रीमती होप कुक पनि आफ्ना दुई बच्चालाई लिएर चोग्याललाई छाडेर गइन्। उनलाई यो सबै झेल्न निकै मुश्किल भयो । सन १९८२ मा क्यान्सरबाट कुकले ज्यान गुमाइन् । जब सिक्किम भारतमा विलय हुने प्रक्रिया शुरु भयो चीनले त्यसको तुलना सन् १९६८ मा रुसले चेकोस्लोवाकिया माथि गरेको आक्रमणसँग गर्यो । त्यसबेला इन्दिरा गान्धीले चीनले तिब्बतमाथि गरेको आक्रमणको सम्झना गराइन् । भुटान भने खुशी भयो किनभने उसलाई लाग्यो अब सिक्किमसँग जोडेर आफूलाई हेरिँदैन ।
तर सबभन्दा बढी विरोध नेपालमा भयो । सिक्किममा सबभन्दा बढी ७५ प्रतिशत जनसंख्या नेपाली मूलका व्यक्तिहरुको थियो । भारतभित्र कैयौँ तप्कामा यसको विरोध भयो । जर्ज वर्गीजले हिन्दुस्तान टाइम्समा ‘अ मर्जर इज अरेन्ज्ड’ भन्ने शीर्षक दिएर सम्पादकीय लेखे । “जनमत संग्रह यति हतारमा गराइयो कि यो पूरा प्रक्रिया सन्देहको घेरामा पर्यो। जनमत संग्रहमा यस्तो प्रश्न सोधियो- तपाईँ चोग्यालको पद समाप्त गरिँदैछ र सिक्किम भारतको हिस्सा बन्दैछ भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ ? यी दुवै अलग-अलग मुद्दा थिए जसको आपसमा कुनै सम्बन्ध थिएन। आश्चर्य यो गान्धी तथा नेहरुको देशबाट भइरहेको छ ।”
सिक्किम भारतमा विलय गर्दा राजनेताका साथमा भारतको गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ ले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिमा खेलेको थियो ।
दासले त्यसबेला विभिन्न भोजहरुमा रअका अधिकारीसँग भेट भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “म उनीहरुसँग सोध्थेँ मलाई बताउनुस् न के भइरहेको छ तर उनीहरु मलाई केही बताउँदैन थिए ।
एकदिन उनीहरु मेरो घर आए र भने माफ गर्नुहोला हामी तपाईँसँग कुनै कुरा गर्न सक्दैनौँ । हामीसँग निर्देशन छ कि मुख्य कार्यकारी अधिकारीलाई सिक्किममा भइरहेको कुनै घटनाको बारेमा नबताइयोस् किनभने उसले आफूसँग भएको जानकारी चोग्याललाई बताउने गल्ती गर्नसक्छ ।” “म तपाईँलाई इमानदारीका साथ भन्छु अन्तिम दिनसम्म सिक्किममा के भइरहेको छ भन्ने मलाई भारतको गुप्तचर एजेन्सीबाट कहिल्यै जानकारी दिइएन ।”
इन्दर मल्होत्रा ठान्छन् रअको सिक्किम विलयमा निर्णायक भूमिका अवश्य थियो तर त्यसबार राजनीतिक नेतृत्वले दिशानिर्देश गरेका थिए । इन्दिरा गान्धीले रअका प्रमुख रामनाथ काव, पीएन हक्सर र पीएन धरसम्मिलित बैठक बोलाएकी थिइन् । कावसँग सल्लाह माग्दा उनको जवाफ थियो, “मेरो काम सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने हो सल्लाह दिने होइन ।”
दास भन्छन्, “यो पूरा प्रकरणमा इन्दिरा गान्धीलाई लगातार जानकारी दिइएको थियो भन्ने हामीलाई विश्वास थियो । मैले इन्दिरा गान्धीसँग ११ वर्ष काम गरेको छु। विशेषत कसैले उनीसँग निहुँ खोजेको छ भने उनी त्यसलाई माफ गर्दिनथिइन् । चोग्याललाई कहिल्यै पनि बदल्न सकिन्न भन्ने उनलाई लागेको थियो । सम्पूर्ण सिक्किम प्रकरणमा उनी प्रमुख नायिका थिइन् हामी त उनका सहयोगी मात्र थियौँ ।”
सिक्किमलाई भारतको २२ औं राज्य बनाउन संविधान संशोधन विधेयक २३ एप्रिल १९७५ मा लोकसभामा पेश गरिएको थियो। सोही दिन २९९-११ मतले उक्त विधेयक पारित गरिएको थियो । राज्यसभाबाट उक्त विधेयक २६ एप्रिलमा पारित भयो र १५ मे, १९७५ मा जब राष्ट्रपति फखरुद्दिन अली अहमदले यो विधेयकमा हस्ताक्षर गरे र नामग्याल राजवंशको शासन समाप्त हुन पुग्यो । बीबीसी हिन्दि
साउन २ गते, २०७४ - ११:५९ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच...
क्यानडाको टोरन्टोका एक व्यक्तिले भाडामा लिइएको भ्यान पैदल यात्रु हिँड्ने व्यस्त मार्गमा योजनाबद्ध...
मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले ८० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि ल्याएको घर घरमा स्वास्थ्य...
काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ‘बुद्धिजीवी’...
काठमाडौं । साना किसान बिकास बैंक लिमिटेडले अहिलेसम्म देशका ६८ जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । विसं...
काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने भन्ने...
१७ बर्ष विदेश बसेर फर्किएपछि टेम्पो चलाएर नेपालमै मासिक ५० हजार कमाउँछन् घिमिरे
झापा । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा झण्डै आठ वर्ष र कतारमा नौ वर्ष बसेर स्वदेश फर्किएका...
प्रतिव्यक्ति ऋण २ हजारले बढ्यो, एक नेपालीको टाउकोमा २४२७६ ऋण
काठमाडौं । नेपालीको कूल ऋण रु दुई हजार ११४ ले बढ्न गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति ऋण रु...
केपी अोली र भीम रावलको सम्बन्धमा कसरी अायो दरार ?
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलबीचको सम्बन्धमा...
मेलिना राईलाई किन आँखा लगाउँछन् विरेन्द्र श्रेष्ठ (भिडियोसहित)
काठमाडाैं । गायक तथा इन्जिनियर विरेन्द्र श्रेष्ठ र मेलिना राइको स्वर र अम्बिका गुरुङको शब्दमा रहेको...